Fampielezan-kevitra : Tsy najain-dRajoelina ny fepetran’ny fitoniana -
AccueilSongandinaFampielezan-kevitra : Tsy najain-dRajoelina ny fepetran’ny fitoniana
05/12/2018 admintriatra Songandina 0
Nanomboka omaly 4 desambra, ary haharitra 15 andro ny fampielezan-kevitra amin’ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena, izay hifanandrinan’ny kandidà laharana faha-25, Marc Ravalomanana, sy ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina.
Nahoraka ny teto an-drenivohitra, izay nanombohan’ny kandidà Marc Ravalomanana ny fampielezan-kevitra, ary saika tazana teny amin’ireo toerana maro ireo mpanentana manao ny fanamian’ny kandidà laharana faha-25 tamin’izany. Tsara ny andro voalohany ho an’ny kandidà Marc Ravalomanana, izay natomboka tamin’ny fotoam-pivavahana tetsy amin’ny foibe, tetsy Bel’Air.
Saingy, ny mifanohitra amin’izay kosa ny an’ny kandidà laharana faha-13, Andry Rajoelina. Vantany vao manomboka ny fampielezan-kevitr’ity fihodinana faharoa ity dia efa tsy nanaja ny fepetran’ny fitoniana izy ireo.
Raha tsiahivina tokoa mantsy, mbola tsy nanomboka akory ity fampielezan-kevitry ny fihodinana faharoa amin’ny fifidianana Filoham-pirenena ity dia efa nanantitrantitra ny teo anivon’ny vaomiera mahaleo tena misahana sy mikarakara ny fifidianana (Ceni), fa ireo kandidà mpifaninana dia tokony samy manentana mba hipetrahan’ny fitoniana. Izany hoe, samy mitondra ny ondriny sy ny olony hanaja ny fepetra takiana amin’ny fifidianana.
Toraka izany koa ny antso avo nataon’ny Fiarahamonim-pirenena ho amin’izany fametrahana fitoniana izany. Teo ihany koa ny komitin’ny fampihavanana malagasy na ny CFM, izay nanentana ho amin’izany koa…
Tsy mba izay mihitsy anefa ny an-dry kandidà mpanongam-panjakana, na ny kandidà laharana faha-13 fa dia manao adihevitra mirefarefa amin’ny tany dieny aty am-boalohany. Tsy misy fahamatorana, ary indrindra tsy misy fanajana izany lalàm-pifidianana izany fa dia manao izay saim-pantany fotsiny ihany hoenti-mambabo ny fon’ny vahoaka anatin’ny fitaka bevava sy fanasoketana olona…
Milaza ny antsanga tsy aman’orana rehetra izao, amin’ny alalan’ny adihevitra. Hita taratra amin’izany sahady fa ambany fisainana, ary manao zavatra tsy am-piheverana manoloana ny mpiray tanindrazana. Ny hitarika ny vahoaka amin’ny ady an-trano no tena ketrik’i ry Andry Rajoelina sy ny forongony.
Ny kandidà mpifanandrina amin’ity mpanongam-panjakana ity anefa dia mametraka ny fitoniana hatrany. Tsy manao fihantsiana, ary tsy mamaky ady fa dia manentana ny vahoaka sy ny mpifidy hatrany hanatanteraka ny adidy masina hanehoan’izy ireo ny safidiny, ary koa mandresy lahatra ny vahoaka amin’ny alalan’ny fandaharan’asa madio.